Vacuum namaoka Fitaovana
Stainless Steel Laboratory Vacuum lafaoro
Laboratory 133Pa Vacuum lafaoro
± 1 ℃ Laboratory Vacuum lafaoro
+5 ~ 40 ℃ Laboratory Vacuum lafaoro
Laboratory 2pcs Vacuum lafaoro
50 Piece / Pieces isam-bolana Laboratory Vacuum lafaoro
Laboratory Vacuum lafaoro Package: gitara raharaha na ny toho-tantely baoritra fonosana.
Product Name: Laboratory Vacuum lafaoro amin'ny Pump
Laboratory Vacuum lafaoro Application
Laboratory Vacuum lafaoro Features
Laboratory Vacuum lafaoro Specifcation
Product Name Laboratory Vacuum lafaoro
Laboratory Vacuum lafaoro talantalana 2 Piece
Laboratory Vacuum lafaoro Zintin'aratra 220V 50HZ
Laboratory Vacuum lafaoro Material ivelany vy , hateviny araka ny 1.2mm
Laboratory Vacuum lafaoro Inside Material SS, thinckness toy ny 3mm
Size ivelany (MG) 595 * 600 * 1245mm
Inside ambony (MG) 450 * 450 * 450MG
Laboratory Vacuum lafaoro Toetra mampiavaka
Vita tamin'ny high quality mangatsiaka-nanakodia vy lovia, vita amin'ny vovoka electrostatic fanafody, ny akanjo lava dia sarotra sy mafy orina, miaraka amin'ny harafesina fanoherana mafy.
Ny Studio ho amin'ny avo lenta Stainless vy lovia, boribory endrika, malama, malama, mora madio.
Trano fonenana sy ny Studio, mameno ny fitaratra volon'ondry mafana loatra insulation ara-nofo, dia manana asa insulation mafana tsara, mahomby manome antoka ny marina ny fahamarinan-toeran'ny ny mari-pana ao amin'ny governemanta sy ny fampiasana ny tontolo iainana.
Ny varavarana dia ho an'ny fitaratra tokotanin-tsambo roa rafitra, ny ara-nofo voafanan'ny mpanendy amin'ny fanendasa-hitan'ny azo mazava tsara, ary manana hafanana tsara insulation vokany. Afaka amim-pahombiazana tsy may mpandraharaha.
Studio sy ny fitaovana amin'ny hafanana mahatohitra fingotra famehezana peratra eo amin'ny fitaratra varavarana, mba hahazoana antoka mba hahazoana mari-pahaizana ambony banga ao amin'ny boaty.
Ny ivelany ny heater ambonin'ny dia nametraka teo amin'ny rindrina anatiny ny atrikasa, ka hanatsara ny hitovy ny ny mari-pana ao amin'ny governemanta araka izay azo atao, ary mba hanamorana ny efitrano madio.
Fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny alalan'ny teknolojia nomerika microcomputer-tsaina orinasa mpamokatra entana, miaraka amin'ny orinasa PID fametrahana tena sy miasa efatra nitondra avo roa heny Windows famantarana, ny mari-pana fanaraha-maso ny fametrahana mazava tsara, mafy manohitra ny jamming fahaizana, ary ny hetsika tena mety.
Laboratory Vacuum lafaoro-katerena Accessories
Laboratory Vacuum lafaoro Related Products
Laboratory Vacuum lafaoro fonosana & Shipping
Laboratory Vacuum lafaoro fonosana: gitara na ny fanondranana baoritra.
Laboratory Vacuum lafaoro Delivery: Ao anatin'ny 15 andro fiasana.
Eny, afaka ampanjifaina misy entana araka ny mpanjifa ny fepetra. Toy ny malefaka, plug sy ny talantalana.
PayPal, West Union, T / T, Izaho tsy ampy anao ny mba mametraka amin'ny Alibaba, dia afaka mandoa ny carte de crédit
(100% fandoavam-bola mialoha.)
Tao anatin'ny 15 andro fiasana.
Ampiasao Industrial 500 Avo Degree Temperature Hot ...
OEM ODM Service Hearing fiarovana Shooting Hun ...
Temperature avo Industrial Laboratory Muffle F ...